एसएलसी नतिजा ः व्यापार बढाउने बहाना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
एसएलसी नतिजा ः व्यापार बढाउने बहाना
२०७१ असार ९, सोमबार ०४:१७ गते
अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयका विद्यार्थीले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै हुँदैन, उच्च श्रेणी अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएन भने उसले मरेतुल्य हुनुपर्छ । जीवनका अनेक पाटाहरु हुन्छन्, त्यसमध्येको शैक्षिक पाटोको पनि पूर्ण लक्ष्य होइन एसएलसी परीक्षा । तर, अहिले एसएलसीलाई जीवनकै महान् लक्ष्यका रुपमा व्याख्या गरेर त्यसमा सर्वोत्कृष्ट हुन अभिप्रेरित गरिँदै छ । यो अभिप्रेरणाका कारण एसएलसीमा असफल हुनु भनेको जीवनमै असफलता बेहोर्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ ।
एसएलसी नतिजा निस्केलगत्तै आत्महत्या गरेका समाचारहरु आउन थाल्छन् । अहिलेसम्म एसएलसी उत्तीर्ण हुन नसकेकाले मात्रै आत्महत्या गरेको सुन्नु परेको छ । एसएलसीलाई यसरी नै हाउगुजी बनाउने हो भने चाँडै नै उच्च श्रेणी ल्याउन नसकेर विद्यार्थीले आत्महत्या गरे भन्ने खबर सुन्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यो उच्च श्रेणीपछाडिको मोह के हो, अचम्म छ ! उच्च श्रेणीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण भयो, साह्रै नै गज्जब भयो । प्रथम श्रेणी ल्यायो, स्याब्बासै भनौँ । दोस्रो श्रेणीमा आयो, लौ है अगाडि बढ्न अलि मेहनत गरौँ भनौँ । तेस्रो श्रेणी ल्यायो, अघिल्लो चरणको शैक्षिक यात्रा तिमीलाई सहज नहुन सक्छ, मेहनत अत्यधिक गरौँ भन्ने सल्लाह दिने गरौँ । अब कोही असफल हुन सक्छ; जीवन नै सकिएको छैन, मौका आउँछ प्रयास जारी राखौँ भन्ने प्रेरणादायी कुरा गरौँ ।
तर विद्यालय, समाज र परिवारले यसो गर्छ ? अहँ, पटक्कै गर्दैन । खास गरेर अंग्रेजी माध्यममा पढाउने निजी स्कुलहरुको ध्याउन्न भनेको शतप्रतिशत नतिजा ल्याउनु हुन्छ । राम्राराम्रा थोरै विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराएर सवैलाई उत्तीर्ण गराउने विधि के हुन सक्छ, निजी स्कुलहरुको चासो र चिन्ता यही नै रहन्छ । एसएलसीमा टेस्ट परीक्षा राख्न नपाउने नियम उनीहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
मानौँ, हामी सुरूको कक्षामा सय जना विद्यार्थी सामेल गर्छौं । अनि, एसएलसी दिने बेलासम्म तिनीहरुमध्येका राम्रा केही छनौट गरेर शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने विधि के हुन्छ, त्यही नै हाम्रा लागि चासोको विषय हुने गरेको छ । नर्सरीमा भर्ना भएका सयमा सयलाई नै एसएलसीमा सामेल गराएर उत्कृष्ट नतिजा कसरी ल्याउने, त्यसतर्फ पटक्कै सोच्दैनौँ भने पनि हुन्छ । भारतीय च्यानलहरुमा आउने रियालिटी शो सञ्चालन गरेजस्तो भैदिए क्या गज्जब होस् भन्ने चाहना राख्न थालेका छौँ हामी । हजारौँलाई सामेल गराएर छनौट गर्दैगर्दै उत्कृष्ट एक छान्ने गरिन्छ, रियालिटी शोहरुमा । हाम्रा स्कुलहरुको ताल पनि यस्तैयस्तै हुँदैछ । रियालिटी शोमा असफल भएकाले आत्महत्या गरेको सुन्न पाइँदैन, तर एसएलसीमा असफल भएमा आत्महत्या नै गर्छन्, फरक यही हो ।
एसएलसी परीक्षा सार्वजनिक भएपछि एक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई बधाई दिन पत्रिकामा विज्ञापन निकाल्ने भयो । सो विद्यालयमा सेकेन्ड डिभिजनमा उत्तीर्ण हुनेहरु पनि रहेछन् । अब उनीहरुको नाम र फोटो कसरी नदेख्ने गरेर छाप्ने हो भन्नेतर्फ लागेका थिए विद्यालय सञ्चालकहरु । यो कस्तो तरिका हो ? यो कस्तो चिन्तन हो ? उत्तीर्ण हुँदा पनि जस पाउन गाह्रो छ, विद्यार्थीलाई ।
एउटा विद्यालयले पत्रकार सम्मेलन राखेर आफ्नो विद्यार्थी देशकै उत्कृष्ट १० भित्र परेको दाबी ग¥यो । त्यस विद्यालयमा ११ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्णं भएका रहेछन् । विद्यालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा अनुत्तीर्ण भएको भन्ने उल्लेखै थिएन । निकै होसियारीका साथ तयार गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थी फेल भएका छन् भन्ने तथ्यमा पर्दा हालिएको थियो । विद्यालयलाई सरस्वतीको मन्दिर भनिन्छ । सरस्वतीको मन्दिरमा पनि झूटको खेती गर्न खोजियो ।
हाम्रा शिक्षालयहरु किन यस्ता हुँदैछन् ? विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन सक्छन्, तर विद्यालय नै अनुत्तीर्ण भएको कुरा सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछ । अनुत्तीर्णलाई कमजोरी ठानेर लुकाउन भरमग्दुर प्रयास
गर्छ । नेपालभरमै उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको दाबी गर्ने विद्यालयको मानसिकता त यो छ भने अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको मानसिकता झन् कति कमजोर भएको होला ? एसएलसी अनुत्तीर्ण हुँदैमा कमजोर मानसिकता भएकाहरुको जमात तयार पार्दै छौँ हामी । एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भए पनि प्रयास जारी राखे उत्तीर्ण भएर देश र समाजलाई मह¤वपूर्ण योगदान दिएकाहरु धेरै छन् हाम्रो देशमा । बरू, उत्कृष्ट नतिजा ल्याएकाहरुले यो देश र समाजलाई के–के गरे, त्यसको खोजी कतैबाट भएको छैन ।
एउटा व्यक्तिको समग्र जीवन र शैक्षिक जीवनमा पनि एसएलसी नतिजाको सफलता र असफलताले खेल्न सक्ने भूमिका के–कति छ ? कसैले खोजेको छैन । तर, यसलाई जीवनकै मह¤वपूर्ण नतिजाका रुपमा अर्थाइन थालियो । एसएलसी परीक्षा कम मह¤वपूर्ण हो भनेर मैले भन्न खोजेको पनि हैन, तर असफल हुँदैमा र उच्च अंक नल्याउँदैमा जीवनको अघिल्लो चरणको यात्रा डामाडोल हुन्छ नै भन्ने छैन । विद्यार्थीलाई उच्च अंक ल्याउन अभिभ्रेरित गरौँ । मेहनती बनाऊँ । पढ्नुपर्छ भन्ने भावना
जगाऔँ । तर, राम्रो अंक नआउँदैमा तँ खत्तम भइस् भन्ने लाञ्छना लगाउन भने पाइँदैन ।
विद्यार्थीले उच्च अंक ल्याओस् भन्ने शिक्षक र विद्यालयको चाहना के विद्यार्थीको हित हेरेर नै व्यक्त भएको हो त ? यसो विचार गर्दा होइन भन्ने उत्तर आउँछ । मेरो विद्यालयमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन्, मेरो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी उच्च श्रेणीमा धेरै उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा विद्यालयकै स्वार्थमा बढी प्रयोग भएको छ । यो कुरा विज्ञापन गरेर विद्यार्थी बढीभन्दा बढी तान्न खोज्छन् विद्यालयहरु । अनि, यसैको बहानामा शुल्क पनि बढी लिन पाइने स्वार्थ हुन्छ, विद्यालयहरुको । जहाँका विद्यार्थी राम्रो श्रेणीमा धेरै पास हुन्छन्, त्यहीँकै शुल्क बढी ! यो त जानेभोगेकै कुरा हो ।
शिक्षा व्यापारको वस्तु बन्यो । यो व्यापारमा विद्यालयहरु खरो उत्रनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट पार पाउन विद्यालयले विद्यार्थीलाई नै उपयोग गर्न थालेको छ । थोरै लगानी र राम्रो मुनाफा, कसरी हुन्छ विद्यालयहरु यसरी नै सोच्छन् । मासिक फि मात्रै तिर्ने विद्यार्थी कम नम्बर ल्याउला या असफल नै
होला । पैसा तिरेर टयुसन् या कोचिङ पढेकाहरु राम्रो नम्बर ल्याएर पास होलान् । विद्यालयहरु त्यो कोचिङ, ट्युसन नपढ्नेलाई कसरी रोक्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । टेष्ट परीक्षा लिन नपाउने भनेपछि उनीहरु अहिले रूष्ट छन् । सबैले बराबर ज्ञान आर्जन गर्न सक्दैनन् । तर, शिक्षकले सबैलाई बराबर सिकाउने र पढाउने गर्नुपर्छ । चाँडो सिक्नेलाई बढी ध्यान दिने र ढिला सिक्नेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी विकास भएर गएको छ ।
उच्च श्रेणीमा पास हुनु विद्यार्थीका लागि पनि मह¤वपूर्ण नै हो, सौभाग्य नै हो । तर, विद्यार्थीले पाएको सो सफलता विद्यालयहरुले आफ्नो उपार्जनका लागि उपभोग गर्ने विकृति सुरू भएको छ । यसलाई हेर्ने र रोक्ने कसले ? उच्च श्रेणी ल्याउनेका अभिभावक त्यसै मख्ख, नल्याउनेका अभिभावक त्यसै मलिन । बाहिरकाले किन चासो दिने ?
सरकारी स्कुलहरुमा शिक्षकहरुले पढाउँदै पढाउन्नन्, जसका कारण नतिजा लाजमर्दो हुने गरेको छ । सफलता, असफलताको जस तथा अपजस भोग्ने कोही भेटिन्नन् सरकारी विद्यालयमा । निजी विद्यालयले नतिजालाई बहाना बनाएर व्यापार गर्न लाग्छन् । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको जल्दोबल्दो समस्या अहिले यही हो ।